Home Wararka Maxaa ka jira Sheegashada Itoobiya ee Qabshada Shabaab ay ku qabteen...
Maxaa ka jira Sheegashada Itoobiya ee Qabshada Shabaab ay ku qabteen Mustaxiil?
Iyadoo xaaladda Dalka Itoobiya ay aad u kacsantahay ayaa faah faahin waxay ka bxisay howl-gal qorsheysan oo ay sheegeen inay fuliyeen ciidamada ammaanka, kaas oo ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida ee dalkaasi, isla-markaana lagu soo qabtay ‘xubno mid ah kooxda Al-Shabaab’.
Qoraalka ka soo baxay is-maamulka Soomaalida ayaa waxaa lagu sheegay in howl-galkaasi lagu fashiliyey rag lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, isla-markaana isku dayey inay gudaha u galaan dalka Itoobiya, iyada oo lagu qabtay deegaanka Mustaxiil iyadoo la leeyahay raggaasi waxay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya, waxayna doonayeen ‘inay falal liddi ku ah amniga’ ka geystaan dalka Itoobiya gudahisa.
“Laba qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabab oo isku dayay inay ka soo galaan dhinaca Soomaaliya ayaa lagu qabtay deegaanka Mustaxiil ee dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya,” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay dowlad deegaanka
Sidoo kale warsaxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in is-rasaaseyn dhex-martay ciidamada ammaanka iyo sidoo kale raggaasi lagu toogtay mid ka mid ah tuhmanayaasha, halka mid kalena lagu dhaawacay, sida uu shaaciyey ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Ma jiraan wax caddy oo laga hela dhinac kale ama Alshabab oo Ła ogyahay inay geyigaas ku sugan yihiin. Bishii Janaayo ee sannadkaan ayey dowladdu sheegtay in la xiray tobanaan qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab.
Previous articleMid kamida kuraasta Senator-ka Jubbaland oo lagu kala iibsaday in ka badan $250 kun oo doollar
Next articleLafta Gareen oo soo saaray liiska Musharaxiinta Aqalka Sare
Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo la kulmay Madaxweynaha Dalka Jabuuti
(Deg Deg) Qarax lala eegtay Gud. Maxkamadda Ciidanka Qalabka sida